Iskeetboodhyada Electric laga yaabaa Riders Dayuurada - Jomo Technology Co., Ltd
Marka lagu daydo hoose muuqday ee lagu iibiyo suuqa, ay la soo keliya u maleeyeen in loo isticmaalo gaadiidka hooyo, isagoo weyn marka aad doonayay inay guriga saaxiib tagno, dugsiga sare, ama qaar ka mid ah gaadiidka kale. Tani skeidgareeyo korontada deg deg ahyimaado la jejebiyey a disc gadaal, taayirada pneumatic weyn wadada waxaana la shaqeeya by a Brushless Hub Motor 350W * 2 iyo 20pcs18650 unugyada lithium Heerka Sare isticmaalaysa aad magaalada la this dhexe hoose ee design cuf! Inta aad farsamo noqon doonaa awood u baytariyo isku bedelasho, ma aha a Mudanayaasha swappable kulul, si aad u lahaa macno ahaan la iskuruuga pack ah ay ku riday mid ka mid brand cusub. In la eego awoodda, waxay u muuqataa si fiican si caddaalad ah ku xirato laga yaabaa in feer sida ay awoodaan in ay gaaraan xawaare sare ee 26mph. Waxay ka dhigaysa isticmaalka Manta Drive ogaada-sida oo uusan isticmaalin hadalhayaan ama suunka. Waxaa loogu talagalay in loo isticmaalo on nooc kasta oo terrains, isagoo ugu sarreeya ee magangelyo reyreyn u baahan si ay u gaaraan xawaare xad-dhaaf ah on terrains pretentious.
By habka of socday degdeg ah oo duulaya ilaa kuraha, isagoo sare tiro ah waalan ee danab ee motor weyn oo dhan kaga badisay markii ugu, si kastaba ha ahaatee waxaad u baahan doontaa skeidgareeyo si aad u eegto iyo waayo-aragnimo la mid ah ka mid ah sida wax ku ool ah. Si kastaba ha ahaatee haddii aad rabto in lagu skeidgareeyo koronto in uu yar yahay, oo khafiif ah, iyo kharashka eego hooseeyo, ku Roto-band (brand KOOWHEEL) skeidgareeyo korontada waa doorashadaada ugu fiican ee hadda. The Roto-band skeidgareeyo dukaanka online aad ka bixin taxane ah oo hoverboard koronto , oo ay ku jiraan laba is wheel dheelli mooto , marna laabi wax mooto korontada iyo ugu kulul afar giraangirood oo longboard korontada . Hadda oo aan heysano qayb hordhaca kasta oo jidka ayaa looga tuuraa, aynu doonayno inaynu u hubiso soo baxay oo tayo sare leh iyo waxqabad aad u fiican rullebrett korontada heli halkaas, oo waxaan arki doonaa qiimaha ay tafaariiqda on Roto-band Westgate.
Qaar badan oo ka mid ah kuwan cusub hoverboard korontada waxaa ay gacanta ku fog, Bluetooth fog, kuwaas oo kaa caawinaysaa in aad dardar ama kala jejebiyey la thumbwheel ah dareen leh, iyo waxa ay sidoo kale ayaa LED tilmaamayaasha aad muujinaya sida juice ka badan aad ka tagtay waxaa laga yaabaa in aad skeidgareeyo korontada. Mid ka mid ah qaababka badan coolest ah Roto-band ( Koowheel ) waa in ay app wuxuu kuu ogolaanayaa fuula si uu u bedelo firmware ee guddiga wirelessly jidkii Bluetooth. Dabcan, tani waxay ahayd doorasho aad u cayriin si loo cabbiro waxqabadka ma in la yidhaahdo caadiga ah ee guddiga iyo fursadaha oo looxyada lama tixgeliyo.